Kuedza Tiny Core Linux | Linux Vakapindwa muropa
Ini ndaive nekunzwa kuti izvi Tiny Core Linux Icho chaive chinhu chakanaka uye kwete, kwete nekuti haina huremu futi, ndinoreva, zvakare chimwe chinhu chakajeka, asi zvinopfuura izvo, ndizvo zvandakauya kuzokuudza.
Pandakaverenga kuti itsva GNU / Linux distro ye10 chete MB yakanga yaonekwa Ndakafunga kuti chaive chinhu chinonhuhwirira, ndatove pandakaona imwe kana imwe skrini ndakaitora zvakanyanyisa, zvirinani yakanga isina hwindo maneja monstrosity asi jwm.
Iyo ine mukana kune yakawanda yakanaka mapakeji uye inogona kuiswa ese ari maviri akaoma dhiraivha uye pane pendrive, zveshuwa, "neruoko" pasina vabatsiri vevamwe mamwe ma distros.
Izvo zvinondiyeuchidza nezve fungidziro iyo yaakaita pandiri nguva yekutanga yandakanzwa nezvayo Damn Diki Linux asi ini ndaigara ndichiyedza uye ini ndaisazvifarira, ikozvino ndaida kuziva Tiny Core yaive yakanaka kana kusagadzikana seimwe ... uye ndakaiyedza.
Nenzira, inobatana neInternet kuburikidza neDHCP, saka kana iyo router yakagadzirirwa zvakanaka inotanga iyo Internet pachayo, asi kana zvisiri, haishande chaizvo.
Yakawanda sei 10 MB
Ndakafunga kuyedza pamusoro QEMU, asi chirongwa ichi chinononoka uye ndakanga ndisati ndamboedza chero chimwe chinhu, saka ndakafunga Virtualbox OSE (yemahara vhezheni) iri mune yeDebian repositori uye iri nyore kushandisa uye inoshanda zvirinani zvirinani. Nenzira iyo chimwe chinhu chakakurudzirwa kwazvo kuchinja icho, dzimwe nguva chinogumira QEMU.
Ndakaitanga ndikawana isina chinhu desktop uye menyu ine mashoma sarudzo ... asi ine yakanaka kwazvo dock (ndinofunga ndeye AWN, asi handina chokwadi) uye yakanaka kutarisa, mukati mechidzitiro nzvimbo isina inodarika iyo 1024 x 768, iyo VESA mutyairi (iri nyore, nayo zvese zvinoenda).
Sezvo isina kana chero mapurogiramu ekushandisa, isu tinofanirwa kuaisa imwe neimwe, zvinoenderana nezvatinoda, izvo zvakanaka nekuti tinozvirongedza.
Kusiyana DSL mapakeji ako akasarudzika (iyo ine zvimwe zvinokanganisa) uye ine graphical nharaunda yekuisa zvinhu zvinodaidzwa Apps Bhurawuza, chinova chishandiso chinokuratidza mapakeji aripo, diki yekutsvaga, bhatani rekuisa, bhatani rekurodha uye hapana chimwe chinhu. Iwo mapakeji pachawo kugumiswa .tce, .tcem kana .tcel zvinoenderana nekuti vanouya vega, vaine module kana raibhurari, asi pakupedzisira ivo vese vakaiswa nekaviri kudzvanya. Chinhu chisingazivikanwe ndechekuti hachiratidzike kuti pasuru yakaburitswa sei, ini handina kuwana kuti zvakadaro xD, asi zvirokwazvo haisi ipapo
Icho chokwadi ndechekuti inoratidza zvese zviripo mapakeji (hapachina imwe yekuchengetedza kupfuura iyo inoratidzwa kana magirazi akafanana) uye kufamba izvo zvavanokupa iwe minefield (firefox) mushanduro 3, chimwe chinhu chisingafungidzike kufunga nezvenyaya ye10 MB uye ndangariro yepasi yemidziyo. Zvakanaka, ini ndanga ndagadzira muchina wangu ne256 RAM uye yaishanda mushe mushe, muQEMU kuvhura Minefield kwaive kutambudzwa, asi neVirtualBox yaibata senge PC chaiyo ndokuivhura zvakanaka uye zvichidikanwa, isingadarike mana tabo uye neimwe yakavhurika chirongwa.
Sezvo zvese zvese zvinoda kuisirwa, ini zvakare ndaida chinyorwa chemavara, kunyange chiri chimwe chezvinhu zvishoma izvo zvinounza, a Vi uye sezvo ini ndisiri programmer uye zvinondinetsa ini kuti zvinhu zvakapiswa nekuti hongu, ini ndakaisa a nano chinovawo chinyorwa asi "chinowanzoitika" uye chakandikwanira.
Kuisirwa kwese kwakashanda zvakanakisa, saka ndakaedza kuisa chirongwa chidiki, iyo scrot kutora izvo zvakatorwa kubva kune imwecheteyo system uye Ini handina kukwanisa kuiisa nekuda kwekutsemuka kutsamira kunyangwe uchiisa iyo yekuvaka package sezvo yanga isiri mune zvekuchengetedza.
Kutora mashoma screenshots "kubva kunze" uyezve kunyangwe kubhurawuza munzvimbo dzese dzinogona kuitika (ine Flash 9 sepakeji), Ini ndakadzima sevha ndichifara kwazvo nezvakaitika kunyangwe hazvo kuve nyore kwezvinhu zvese.
Seyedzo yakanaka, ndakanakidzwa nekuishandisa uye kurodha pasi mapakeji kuti ndikwanise kuishandisa. Zviripachena kuti pane dambudziko kana izvo zvatinoda kurishandisa kusvika nekushandisa neCD, tinofanirwa kuisa zvinhu zvakawanda kutanga kubva kubhurawuza.
Wakafarira iyi distro futi?
Pane mumwe munhu akambozviedza?
Kana iwe wakashinga kuzviedza teerera Tiny Core Linux mumuchina chaiwo kana pendrive
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Kuedza Tiny Core Linux
Paunoti router, iwe unoreva modem, handiti? Uye ndingaite sei kuti igadziriswe? Ndingaziva sei kuti yakanyatsogadziriswa?
Zvinonakidza kuona kuti vanokwanisa sei kuchengetedza yakawanda nzvimbo. Ini ndinoti ndiani anogona kufunga kuti nhasi mune gumi megabytes iwe unenge uine kumhanya senge chinhu. Icho chinhu chisingafungidzike.
Ndiri kuyedza, inotaridzika zvakanaka !! Ndiri kunyora kubva kuTiny Core !!! Ndega Minefield chete handina kuiwana, ndakaburitsa Opera ...
Kugoverwa uku kwakabata pfungwa dzangu uye ndiri kuzozviedza pandinogona.
Nezve kubviswa kweapplication, unofanirwa kurodha pasuru «Chishandiso chekuburitsa tce zvinowedzera. (KUEDZA) »
Wow Yakakura kune iyo flash drive mune emergency, asi iyo minimalist uye grey nharaunda haina kunyatsondifadza.
kana kungodzikisa kernel inorema 50mb ¿?
Izvo zvinoenderana nechero ipi?
bah ini ndinofunga vanocheka zvakanyanya ... mune chero mamiriro ezvinhu inoenda kumakiki, muchikamu "zvinhu zvisinganzwisisike" XDDDDD
Lynx kuunza? Ini ndoti kune akachembera mapcs: D
kuti qemu ishande zvine mutsindo iwe unoda iyo yekumhanyisa dura kqemu. Qemu + kqemu vane kuita kwakanaka mukati mezvese zvinhu.
Ndiri kutozvinyora pasi!
Chero ani zvake anogona kumuburitsa mune inopfuura kamwe kukurumidza;)
Ini ndangozviedza uye zviri nyore kwazvo !!
Kana iwe uri muropa uye uchida kuyedza ese aripo distros izvi zvakanaka, asi kuti ushandise iyi linux unofanirwa kunge uine pc ine mavhavha emagetsi: S
Ndakaiyedza mu virual bhokisi uye iri yechinyakare,
Ini ndichaita bvunzo mueepc, zvinoenderana nekuti inoshanda sei, ndichaisiya ipapo, inozoreruka kupfuura chero imwe distro.
Iwe unoziva here kana ichiunza maturusi ekuumbiridza iyo kernel kana kuita kuiswa nemaoko?
Kana iwe ukavaunzira, zvisinei nechinyakare zvingave zviri, chichava chakakwana.
Ndakatozviedza. Uye hoooooo ... huremu hunoshamisa ... asi ndingadai ndakasarudza 100 MB yehuremu, uye zvimwe zvimwe "zvekutanga" chinhu kana chinenge chakakodzera chinosimudza.
Ndinoiona iri green. Inonakidza, asi isingabatsiri, inobatsira isirax, iyo inounza zvese uye iwe unozviunganidza sezvaunoda.
Kuisa inotakurika sisitimu kakawanda, uchingobatanidza kuburikidza dhcp… Ini handiione ichibatsira neimwe nzira.
Kunyangwe hongu, zvinonakidza xD
kugona!! Ndiri kupinda mu linux world uye ini ndaida zvandaiverenga nezve zvidiki, chinokanganisa ndechekuti ini handizive maitiro ekuisa iyo prog kuti iishandise, zvirinani opera ... unoziva nezve chero webhusaiti uko Ndinogona kutanga?
Ini ndinoshandisa TCL uye iri kukurumidza kubhowa (gumi nemaviri masekondi zvakanyanya kana iwe ukaisa opera pairi, zvakare zvimwe).
Pindura kune argos
Hukuru, ndinayo pane yangu usb, inobhururuka pamashini ese, inogona kunge ichishanda senge chero distro asi ichikurumidza nekukwira nhanho nhanho mukumiswa kwemapakeji, ine maneja wepakeji (mune console mode kana negui) iyo inogadzirisa zvinoenderana uye iine mapakeji akanaka, ini ndave kuda kuunganidza mapakeji angu kuti ndipe kune ino iri kuwedzera iri nani distro.
Uye iwe unogona kumisikidza purinda, nemadhiraivha andinoshamisika?